लकडाउनमा एकाएक बढेको सुनचाँदीको भाउ आज ह्वात्तै घ’ट्यो, हेर्नुहोस मूल्य कति ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउनमा एकाएक बढेको सुनचाँदीको भाउ आज ह्वात्तै घ’ट्यो, हेर्नुहोस मूल्य कति ?
काठमाडौं । आज सुनको भाउ स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज सुनको भाउ प्रतितोला ८९ हजार ६ सय रुपैयाँ र तेजाबी सुनको भाउ प्रतितोला ८९ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ तोकेको छ । आज चाँदीको भाउ भने घटेको छ । चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँले घटेर प्रति तोला ९ सय ३५ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बिहीबार चाँदी ९ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।